Uhlu lokugcina lwamabhakede okudla neziphuzo lwe-Co Kildare - IntoKildare
Ukuvakasha kokuqala, Ukudla nokuphuza
Nsuku zonke nguLwesihlanu omusha uma kukhulunywa ngokudla ngaphandle, ukushaya inkantini noma ukuphumula nje ngemuva komsebenzi.
IKildare isiphenduke imbiza eshisayo yokunambitheka kwe-bud-tastic yama-flavour nokukhetha, ngokuqhuma kwezindawo zokudlela eziphezulu nemigoqo.
Ngokusobala asikwazi ukuwabala wonke lapha kepha singakunika okumbalwa nje ukuze uthikhe uhlu lwakho lwamabhakede!
Noma ngabe yisobho nesangweji lesidlo sasemini noma inkomishi yetiye ngokudla okuthile engxoxweni, I-Firecastle eKildare uye wakumboza! Sincoma kakhulu ukufaka ama-Poké Bowls abo amnandi ohlwini lwakho lwamabhakede okudla ngenkathi useKildare. Bayathembisa uma usuzamile uzobuya uthole okwengeziwe futhi siyavuma ngenhliziyo yonke!
Asikwazanga ukwenza uhlu lokugcina lwamabhakede okudla neziphuzo futhi singafaki I-Auld Shebeen ku-Athy. Kubukeka kuqabula kanjani lokhu? Banambitha kangcono kakhulu kubhangqwe nePizza yabo Yenziwe Ngamatshe Eyenziwe Ngezandla noma ama-Crispy Chicken Wings adumile, i-Auld Shebeen inakho konke okudingayo ukuze uthole isidlo esiphelele.
Okuthunyelwe okwabiwe nguFallons of Kilcullen (@fallonsofkilcullen)
Nayi eyodwa yabathandi boshizi laphaya! Ama-Fallons, UNdunankulu waseKildare uMichelin uncoma ulwazi lokudla usanda kufaka lesi sidlo esihle saseBurrata esine-sundrop ne-heirloom utamatisi kwimenyu yabo yasemini yangeSonto. Ama-fallons awagcini nje ngokuba nendawo yokudlela enhle kodwa futhi anendawo yokupaka yangaphandle ehehayo nendawo yokuhlala.
Indawo yokudlela yama-Cooks amabili ne-Wine Bar
Okuthunyelwe okwabiwe yi-TwoCooks (@twocooks_sallins)
Ukupheleliswa kokudla eSallins ngeqembu lowesilisa nowesifazane kusho ukuthi kuhleliwe kokuphindwe kabili! Isikhathi sonyaka silawula kule ndawo yokudlela futhi sichaza imifino nezitsha ezikumenyu, ezahlukahluka kusuka kwezinhlanzi ezintsha kuye kokukhethwa kwemifino, konke kukhonjwe ngamadolls enjabulo. I-TwoCooks ibuyile ivulekile kusuka ngoSepthemba 24 futhi iyaqhubeka nokubhuka manje ngakho-ke qiniseka ukuthola ukubhuka kwakho!
Khiya i-13 Brew Pub
I-classic ephelele, Khiya u-13 Izikhumba Zamazambane Ezihlwabusayo ezilayishwe i-Dubliner Red Cheddar encibilikile, ubhekeni we-crispy wase-Ireland, u-anyanisi wasentwasahlobo futhi wagcotshwa nodoli wozenzele we-chilli mayo odingeka kakhulu ukuba afike ohlwini lwamabhakede okudla nokuphuza lwe-Kildare. Kutholakala eSallins, iLock 13 Brew Pub iyikhaya leKildare Brewing Company. Kungani ungabhangqi izitsha zabo ezimnandi nenye yama-Pale Ales, ama-IPAs noma ama-Lagers abo? Ngendawo yokudlela engaphandle emangalisayo, izinkambo zokuphisa utshwala kanye nokunambitha ubhiya kuyinto engaphuthelwa!
Ukuvakasha kokuqalaUkudla nokuphuza